HomeEnglandXaflad Casho Oo Midaysay Ciyaartooyada kooxaha reer Manchester
Di Maria, Valdes iyo Caballero
Xiddigaha labada kooxood ee Manchester United iyo Manchester City ayaa ku kulmay xaflad casho sharaf ah oo ka dhacday Hotelka San Carlo Italian Restaurant oo ku yaala magaalada Manchester.
Ciyaartooyada reer Argentina ee u kala ciyaara labada kooxood ayaa dhamaantood ka qayb galay xafladdaas casho, waxaanay qaybsadeen kaftan iyo farxad ka muuqatay wejiyadooda iyagoo dhinac isaga leexiyey xurgufta iyo colaadda ka dhexaysa labada kooxood ee ay u kala ciyaaraan.
Xiddigaha Angel di Maria, Pablo Zabaleta iyo Marcos Rojo ayaa wakhti horeba iska xaadiriyey Hotelka iyadoo wax yar kadibna ay soo galeen Willy Cabellera oo ah goolwadaha labaad ee Manchester City iyo Victor Vales oo isna ah goolwadaha labaad ee Manchester United.
Martin Demichelis iyo xaaskiisa Evangelina Anderson oo salaamaya Pablo Zabaleta
Di Maria waxa la socotay xaaskiisa Jorgelina Cardoso, Vales waxa wehelinaysay xaaskiisa Yolanda Cardona, Rojo waxa la socotay Eugenia Lusardo oo ah xaaskiisa.
Marcos Rojo iyo xaaskiisa San Carlo
Caballerro, Zabaleta iyo Martin Demichelis oo ay la socdaan xaasaskooda Lucia Caballero, Christel Castano iyo Evangelina Anderson ayaa sawirro laga qaaday iyagoo casho u wada fadhiya isla markaana dhoolla-caddayn iyo farxad badan qaybsanaya.
Zabaleta iyo xaaskiisa Christel Castano
Ciyaartooyadan ayaa xalay oo dhan ku sugnaa hotelka oo ay ka tageen wakhti dambe, iyagoo ciyaartooyada Manchester United ay is illowsiinayeen guul-darradii Sabtidii ka gaadhay ciyaartii Chelsea. Laacibiinta Manchester City ayaa iyaguna u damaashaaday guushii ay ka gaadheen West Ham maalintii Axadd.
Zach LaVine Oo Loo Caleemo Saaray Xiddiga Xirfada Jaani-goonida Ee Tartanka NBA Ee 2016
Benteke oo ku biiray Crystal Palace
PSG Oo Cashar Kala Kulantay Real Madrid – Farxadii Zizu